Wararka Maanta: Arbaco, Apr 3 , 2013-Shir-weynaha Dib u Habeynta Garsoorka Soomaaliya oo Maanta looga Hadlay Qodobbadda uu Dastuurka ka qabo Garsoorka (SAWIRRO)
Shirweynaha ayaa waxaa kasoo qaybgalay xubno ka tirsan golaha wasiirrada oo ay ka mid yihiin: wasiir-u-dowlaha madaxtooyada, Faarax Cabdulqaadir, wasiir ku xigeenka garsoorka iyo arrimaha diinta, Xasan Maxamed Jimcaale, danjiraha dowladda Ingiriiska u qaabilsan Soomaaliya, Mr. Matt Baugh iyo ergada mataleysa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee shirka lagu marti-qaaday.
Xildhibaan, Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil, wasiirkii hore ee wasaaradda dastuurka, arrimaha federaalka iyo dib u heshiisiinta oo madasha Khudbad ka jeediyay ayaa ka hadlay qodobbada dastuuriga ah ee ka hadlaya muhiimadda uu leeyahay garsoorka iyo sida ay lagama maarmaanka u tahay inay bulshadu hesho nidaam caddaalad ah oo lagu kala saaro markii uu is-qabad-qabsi yimaado.
“Awoodda garsoornimada waxaa iska leh maxkamadaha ayuu qabaa dastuurka ay ku dhaqmeyso dowladda Soomaaliyeed ee la meelmariyay 01-da August 2012-ka, waxaana sidoo kale uu dastuurku amrayaa in la hir-geliyo maxkamad dastuuri ah oo ka madax-bannaan golaha fulinta iyo baarlamanka” ayuu yiri xildhibaan C/raxmaan Xoosh.
Sidoo kale, Marwo Caasho Geelle Diiriye wasiiraddii hore ee haweenka iyo arrimaha qoyska Puntland oo xubin ka ah ergada Puntland u mataleysa ka qaybgalka shirweynaha ayaa xustay inay muhiim tahay in ergadu ay kawada shaqeyso sidii loo heli lahaa qawaaniin ay dadku ku wada-shaqeeyaan si loo ilaaliyo maslaxadda guud ee ummadda Soomaaliyeed, laguna dadaalo sidii ay dadka u heli lahaayeen nidaam caddaalad ah.
Garyaqaan Caasho Kiin Ducaale oo shirka ka hadashay ayaa sheegtay in dhibaatada dalka ka jirta ay sabab u tahay caddaalad-darrada loona baahan yahay in la helo garsoor caadil ah, dowladduna sameyso guddi madax-bannaan oo ka shaqeeya xuquuqda Aadanaha.
Ugu dambeyn, Sheekh C/qaadir Soomow oo k amid ah ergada shirkan kasoo qaybgashay ayaa soo jeediyay in lagu dhaqmo kitaabka Alle soo dejiyay si looga maarmo in la raad-raadiyio sharcii dadka kala hagaya.